Williams_Ind - MT4 အညွှန်းကိန်းများ
နေအိမ် MT4 အညွှန်းကိန်းများ Williams_Ind
မေ 20, 2018
ဘီလ် Williams က '' ကုန်သွယ်စိတ်ကူးများကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေအတွက်, ဒီအညွှန်းကိန်းသင်တို့အဘို့ screen ပေါ်မှာကအားလုံးကိုထည့်လေ့မရှိ.
အညွှန်းကိန်းသည် AO, AC အ, နှင့် MACD.
B.W. အချိန်ဇယား၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏အကောင်းဆုံး visualization များအတွက်, စာရေးသူတစ်ဦးနည်းလမ်းကိုအပေါ်.
ထိုအကိုလည်းအချိန်ဇယားကိုဤမျှအဖိုးတန် Workspace ကိုကယ်ဖို့ကူညီပေးသည်.
တကယ်တော့, ငါသတင်းအချက်အလက် panel ကို၏ဖန်ဆင်းခြင်း၏ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်ပိုပြီးဒီ panel ကိုထုတ်ဝေရန်, အငြိမ်လှုပ်ရှား. ဒါ့အပြင်သူက parameters တွေကိုတစ်ပြတင်းပေါက်ထဲကဖုန်းခေါ်ခြင်းမရှိဘဲရွေးချယ်စရာအမြင်အာရုံ switching ၏စံနမူနာဖြစ်ပါတယ်.
Williams_Inds.mq4 – အချိန်ဇယားအပေါ်ကို manual ထဲမှာပြောင်းရွေ့သည့် panel ကိုတစ်ကုဒ်ကိုယ်စားပြုတယ် .
Williams_IndsS.mq4 – အနေအထား၏ပဏာမ setting ကိုအတူငြိမ် panel က.
အဆိုပါ panel ကိုအချိန်ဇယား၏အရက်ဆိုင်စပ်လျဉ်း positioned ဖြစ်ပါတယ်, လက်ဝဲမှာပထမဦးဆုံးမြင်နိုင်ထံမှအပါအဝင်, နှင့်စပ်လျဉ်းအတွက်စျေးနှုန်းအချိန်ဇယားတစ်ခုစကေးအပေါ် maximal မှ. အဆိုပါ algorithm ကိုမအရှိဆုံးအဆင်ပြေလည်း TF switching မှာအချို့အဆငျမပွမှေုရှိပါတယ်.
လိုအပ်သောနေရာအရပ်အပေါ် panel ကိုရွှေ့ဖို့, ၎င်း၏ပုံကို select ရန်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည် (ထောင့်မှန်စတုဂံ), တစ်ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ပါနေဖြင့်, နှင့်အချိန်ဇယားအောက်တွင်စင်တာထိုသို့ဆွဲယူဖို့. သစ်တစ်ခုနေကြပါပြီ၏ဆိုက်ရောက်နှင့်အတူ, ထို့အပြင် panel က contents တွေကို “လိမ့်မည်
down and to the right fromapregoing site. သငျသညျ overdone ရှိပါက, it is necessary to press key ဖျက်ရန် to remove the selected contour.
ယင်းပုံနှင့် panel ကိုမျက်နှာပြင်ရဲ့ဘယ်ဖက်အပေါ်ဆုံးထောင့်ပွနျလညျထူထောငျရလိမျ့မညျပြီးနောက်, ထိုသို့အားလုံးအပေါ်ကိုထပ်ဆွဲစတင်ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်.
အဆိုပါ panel ကိုအပေါ်အညွှန်းကိန်း၏မြှားနှင့်လက်မှတ်ပေါင်း မှလွဲ. ငယ်နှစ်တံဆိပ်များရှိပါတယ်: လက်နှင့်တစ်ဦး handbell .
အဆိုပါ “လက်” serves for switching ON နှင့် OFF of the manual dragging. ပြုပြင်မှုများအတွက် panel ကို OFF switching. ON switching နှင့် OFF ၏တစ်တံဆိပ်၏ရွေးချယ်ရေးအားဖြင့်လည်းဖြစ်ပေါ် “လက်” and removal by the key ဖျက်ရန်, သို့မဟုတ် Menu မှတဆင့်.
အဆိုပါတံဆိပ်ကိုအခြားအရောင်အားဖြင့်နှင့် switched option နဲ့အတူပွနျလညျထူထောငျရလိမျ့မညျ.
Handbell” works the same way . ဒါဟာညွှန်းကိန်း၏ unidirectional လှုပ်ရှားမှုအကြောင်း signal ကိုပေးသည်, ထိုသို့အလိုအလြောကျပိတ်ထားဖြစ်ပါတယ်.
အဆိုပါငြိမ် panel က.
အဆိုပါငြိမ် panel ကပိုမိုလွယ်ကူစီစဉ်ပေးသည် pixels ကိုအတွက်သြဒီနိတ်၏ parameters တွေကိုအားဖြင့်သတ်မှတ်, နှင့်အနေအထားများထောင့်.
parameter White_Chart_Theme (စစ်မှန်သောသို့မဟုတ်အယူမှား) သုံးစွဲဖို့ဘာသာရပ်များအဘယ်သို့သတ်မှတ်ပါတယ်.
Williams_Ind တစ် Metatrader ဖြစ်ပါသည်4(MT4) အညွှန်းကိန်းများနှင့် Forex ညွှန်ပြချက်၏အနှစ်သာရမှာစုဆောင်းသမိုင်းဒေတာအဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့ဖြစ်တယ်.
Williams_Ind သာမန်မျက်စိမှမမြင်ရတဲ့သောစျေးနှုန်းဒိုင်းနမစ်အတွက်အမျိုးမျိုးသောပိုင်ထိုက်သောနှင့်ပုံစံများကို detect လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းများအတွက်ထောက်ပံ့.
Williams_Ind.mq4 install လုပ်နည်း?
သင့်ရဲ့ Metatrader Directory ကိုမှ Williams_Ind.mq4 မိတ္တူ / ကျွမ်းကျင်သူများက / အညွှန်းကိန်းများ /
Williams_Ind.mq4 ပေါ်မှာ Right click နှိပ်ပြီး
indicator Williams_Ind.mq4 သင့်ရဲ့ဇယားအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်
သင့်ရဲ့ Metatrader ထံမှ Williams_Ind.mq4 ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို4ဇယား?
Next ကိုဆောင်းပါးMMPRO - Dottor Market က